China Vehicle Control Circuit Board Assembly Nlụpụta na Factory | KAISHENG PCB
PCBFuture bụ ụlọ ọrụ PCB nke ọkachamara na nkwupụta nke PCB. Companylọ ọrụ ahụ nwere mmepụta ọkachamara, ule, ahịa na ndị ọrụ ọrụ, na-ewebata teknụzụ na akụrụngwa dị elu n'ụlọ na mba ofesi. Ọ tumadi na-arụpụta 1-24 oyi akwa FR4, metal base Materials (aluminum dabeere, ọla kọpa na-adabere), elu-ugboro circuit circuit.
Mkpuchi ọla: HASL na-eduga n'efu
Isi ihe: FR-4 TG 135
Mkpuchi akpụkpọ anụ: HASL na-eduga n'efu Ofkpụrụ nke Mmepụta: SMT + N'ígwé: 2 Layer PCB
Isi ihe: FR-4 TG 135 Asambodo: SGS, ISO, RoHS MOQ: Mba MOQ
Dị Solder: Nwepu-Free Ọrụ Nkwụsịtụ: Turnkey PCB Assembly Ule: 100% AOI / E-ule / Nlere Anya
Keywords: Ọrụ PCB Assembly, PCB Assembly Process, PCB Population, PCB Assembly Manufacturers
Mgbe ị họọrọ anyị dị ka ụlọ ọrụ PCBA na-ekwenye ekwenye, ị na-ahọrọ isoro gị na ọrụ ga-eweta nke kacha mma. Anyị PCB nzukọ ọrụ izute ndị kasị mma benchmarks na-eso IPC Class 3, RoHS na ISO 9001: 2008-asambodo ụkpụrụ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ijikwa ụdị PCB ọ bụla, ma ọ nwere akụkụ abụọ ma ọ bụ otu akụkụ, SMT, site na oghere ma ọ bụ ọrụ mgbakọ. Ihe ọ bụla ị chọrọ ime, anyị nwere ike ime ya!
Anyị ga na-na kọntaktị gị mgbe niile site na mmalite nke oru ngo niile ruo ebe na-agbaru ma na-ị na-akaghị si n'ichepụta ka nzukọ. Nke a nwere ike inyere gị aka ịchekwa ego na nrụgide na obere ụgwọ PCB, belata oge nchere na ịnye ngwaahịa dị elu. Anyị chọrọ ịchekwa gị oge na ume ka ị wee nwee ike ilekwasị anya na atụmatụ PCB gị - echegbula onwe gị banyere obere ọrụ nke usoro nrụpụta.
PCBFuture bụ ihe na-eduga PCB ngwọta na-eweta. Anyị nwere ike izute gị PCB chọrọ si akụkụ ị nweta ka kọmputa nzukọ. Anyị ga-enyere gị aka ọ bụla nke ụzọ ma nye gị ọkachamara zuru oke na mmesi obi ike dị mma.
Kedu faịlụ na dọkụmentị ị na-arịọ maka iwu PCBA m?
Anyị chọrọ faịlụ Gerber, data Centroid na BOM maka iwu PCBA gị. Dị nnọọ ka ị debere iwu PCB gị na anyị, n'eziokwu, ọ bụrụ na faịlụ PCB Gerber gị gụnyere nbipụta ihuenyo, akara ọla kọpa na mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ, ị ga-eziga naanị abụọ ikpeazụ. Ọ bụrụ na PCB Gerber faịlụ gị na-efu nke ọ bụla n'ime usoro atọ a kpọtụrụ aha n'elu, biko weghachite ha, ebe nke a bụ arịrịọ kacha nta maka PCBA. Maka nsonaazụ kachasị mma, biko zitekwara anyị eserese mgbakọ, ntuziaka na foto ka anyị zere itinye ihe ọ bụla na-edoghị anya na ọbụlagodi, ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị na-ezukọ anaghị achọ ihe ndị a.
Kedu ka m ga-esi tinye akụkụ ma ọ bụrụ na m na-enyefe ọtụtụ iwu?
Enwere ike izipu ọtụtụ ngwa na otu ngwugwu, mana ngwugwu ọ bụla ga-akara akara nọmba ọ bụla
Akụkụ ejiri n'ọtụtụ ọrụ kwesịrị iji akwụkwọ mmado mara ya na ịkekọrịta ha
Jide n'aka na-enye 5% mmezi akụkụ maka onye ọ bụla version
Maka ama ndi ozo, lee ntuziaka anyi nwere na ntinye.
Anyị nwere ọkachamara PCB R&D, imewe, mmepụta otu, na a siri ike injinịa otu, ọgaranya ahụmahụ, maara na oru ngo nhazi na impedance imewe, na ahaziri maka gị na o kwere omume nke imewe plan. Site na ike siri ike, ogo siri ike na nnyefe ọsọ ọsọ, ndị ahịa na-ahụ ya.
Nke gara aga: Turnkey Cheap PCB Assembly
Osote: Ugbo ala GPS Tracker Circuit PCB Assembly
Smart TV Box PCB Assembly Isi